धेरै घर भत्कनुमा सरकार नै दोषी – YesKathmandu.com
धेरै घर भत्कनुमा सरकार नै दोषी
शुक्रबार ०८, जेठ २०७२
काठमााडौं । सरकारले विगतमा साना भूकम्प जाँदा जमिन कसरी हल्लियो भन्ने तथ्यांक ग्राउन्ड मोसन सार्वजनिक नगरेकाले घर बनाउनै नहुने ठाउँमा समेत घर बनाउने अनुमति दिइएको खुलेको छ। घर बनाउन नहुने ठाउँमा समेत घर बनेकाले अहिलेको भूकम्पबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको विज्ञहरूले नै बताएका छन्।
सरकारले ग्राउन्ड मोसनसम्बन्धी तथ्यांक थाहा नदिएकाले नै घर बनाउन हुनेरनहुने र कस्तो जमिनमा कस्ता घर वा संरचना बनाउन सकिने भन्नेबारे भूगर्भविद्हरू अनभिज्ञ देखिएका छन्।
भूगर्भशास्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा।डा। मेघराज धितालले ग्राउन्ड मोसन डाटा बिना गरिएको माटो परीक्षणको केही अर्थ नहुने बताए। ुयो डाटा हेरेरमात्र संरचना बनाउन सकिन्छु, त्रिविमा भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुखसमेत रहिसकेका धितालले भने।
सरकारले यस्ता तथ्यांक गोप्य राखेकै कारण कुन स्थानमा कस्तो असर पर्छ भन्ने थाहै नपाई घर, सडक र अन्य संरचना बनाउने मुख्य आधारबिनै संरचनाहरू बनिरहेको धितालले बताए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
पत्याउँनु हुन्छ ? असनको सटर भाडा २५ रुपियाँ मात्रै
भूकम्पले विश्थापित सुत्केरी विमला भन्छिन्, ‘के पाँच महिने बच्चाकी आमाले चैं खानु पर्दैन ?’
चार हजार १३३ परिवारले आवास पुनःनिर्माण अनुदान नपाउने
भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनी सिके राउतको वचाउमा
‘लौ अमरेशकुमारज्यू नेपाली कांग्रेस मुर्दाबाद, सुशील कोइराला मुर्दाबाद भन्नुहोस्’
अबिरल वर्षाले विराटनगर डुबानमा
देश असन्तुलन र विद्रोहको बाटोमा हिँड्दै गरेको पूर्वराजा शाहको टिप्पणी
स्कटल्याण्डलाई नेपालले दियो १५० रनको झिनो लक्ष्य, अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा पारसको १००० रन
प्राधिकरणले उठाउन सकेन सडक बत्तीको बक्यौता महसुल, कहाँको कति बक्यौता !
चिकनगुनिया सङ्क्रमित महिला रौतहटमा बसोबास गर्ने गरेको पुष्टि
एक पाकिस्तानी सैनिकको देश प्रेम, जसले भारतलाई झस्कायो